လက်မကိုနှိပ်ပြီး မျက်လုံးရောဂါတွေကို ဖြေရှင်းကြရအောင် - YOYARLAY Digital Media and News
လက်မကိုနှိပ်ပြီး မျက်လုံးရောဂါတွေကို ဖြေရှင်းကြရအောင်
Published: September 12, 20158:14 am Updated: July 27, 201910:40 pm
ယခင်ရက်တွေက ဇက်ကြောတက်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း စတဲ့ပြဿနာ များအား လက်ကို နှိပ်နှယ်ပေး ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေတဲ့ နည်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု တစ်ကြိမ်မှာလည်း မျက်လုံးကိုက် မျက်လုံး ကြည့်မကောင်းခြင်း မျက်ရိုးများ ကိုက်နေခြင်း စတာတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး တွေကို စာရေးသူ မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ နေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာ ကြည့်နေသူများ စာဖတ် ဝါသနာပါသူများ မျက်လုံးဖြင့် အလုပ် လုပ်ကိုင် နေရသူတွေ လုံး၀ သိသင့်တဲ့ နည်းလေးဖြစ် ပါတယ်။ ပုံကို ကြည့်ပါ။
နံပါတ် ၁ မြှားထိုးထားတာကတော့ မျက်လုံးတွေ ကြည့်မကောင်း ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးတွေ မှုန်ဝါးနေရင် ထိုနေရာလေးကို နေ့တိုင်း နှိပ်နှယ်ပေး လိုက်က်ပါ။
နံပါတ် ၂ မြှားထိုးထားတဲ့ နေရာလေး ကတော့ မျက်ရိုး ကိုက်နေရင် နှိပ်ပေးပါက သိသိသာသာ သက်သာလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၃ နေရကတော့ မျက်လုံးအကြောတွေ တင်းနေရင် နှပ်ပေးပါက သိသိသာသာ လျော့ကျပြီး သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Previous post: ဆူးလေစေတီလား? ကျိုက်အသုတ်စေတီလား?
Next Next post: ဒူးရင်းသီးမှပေးစွမ်းသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
အရပ်ဆိုတာ ရှည်ဖို့ပဲ ရှိတယ် မပုဘူး ဆိုပြီးတော့ ထင်နေကြတဲ့ အယူအဆတွေ မှားပါတယ်။ Post Views: 3,199